9 -ka Dugsi ee Ugu Wanaagsan ee Ey -ga ee Florida 2022
9 -ka Dugsi ee ugu Wanaagsan Eeyaha Ey ee Florida
Eeyaha iyo xayawaanka rabaa? Waxaad iska qori kartaa iskuulada qurxinta eeyga ee Florida waxaadna baran kartaa hababka iyo farsamooyinka habboon ee lagu daryeeli karo eeyaha, macmiilka ama adiga.
Ku koritaanka xayawaanka sida eeyaha, bisadaha, doofaarrada guinea, iwm waxay carruurta siisaa dareen mas'uuliyadeed oo weyn, waxay kor u qaadaa naxariista, waxayna kordhisaa fahamkooda meertada nolosha. Lahaanshaha xayawaan rabaayad ahaan sida dhabta ah waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta horumarkooda waxaadna dareemi kartaa oo aad arki kartaa jaceylka ka dhexeeya xayawaankan rabaayada ah iyo carruurta.
Isla sidaas oo kale ayaa loogu shaqeeyaa dadka waaweyn ee leh xayawaanka rabaayadda ah, iyaga ayaa mas'uul ka ah waxaana lagu hagaajiyaa noole aan runtii noolaan karin la'aantood.
Haddii aad jeceshahay xayawaanka rabaayada ah oo aad rabto inaad u muujiso daryeel weyn iyaga ama mid aad leedahay oo aad rabto inaad barato sida si wanaagsan loogu daryeelo ama loo qorsheeyo helitaanka mid oo aanad wax fikrad ah ka haysan sida loo daryeelo markaa maqaalkan adiga ayaa iska leh. Maqaalkani wuxuu sharxayaa waxa uu yahay iskuul qurxinta oo sii socday si looga wada hadlo iskuulada qurxinta ugu fiican ee Florida.
Ilaalinta eeyaha waa dhaqanka daryeelka eeyaha, oo ay ku jiraan daryeelka nadaafadda iyo nadaafadda iyo sidoo kale kor u qaadida muuqaalka jir ahaaneed ee bandhigyada iyo tartamada. Qofka waxaas sameeya waa eeyaha dhaqda oo lacag baad ku kasbataa markaad sidan samayso.
Ey -haynta ayaa ah warshad soo koreysa oo si xawli ah ugu soo koraysa Maraykanka iyo adduunka oo dhan. Waxaan samaynaa, ka dib oo dhan, waxaan u sujuudnaa saaxiibadeena dhogorta leh. Qaar ka mid ah hawlaha hagaajinta ayaa aad u adag, oo laga yaabaa inaadan lahayn khibrad ama qalab aad adigu ku fulin karto waana meesha uu ka yimaaddo xirfadle ey -dhaqe.
Ka sokow ogaanshaha gudaha iyo dibedda eeyaha qurxinta, xirfadle xannaaneeye wuxuu leeyahay waayo -aragnimo iyo qalab lagu kaydiyo. Dugsiyada qurxinta eeyga ee Florida ayaa kuu diyaarin kara xirfad ahaan sidii khabiir u dhaqda eeyaha oo waxaad heli doontaa shahaado ama diblooma markaad dhammaysato koorsooyinka hagaajinta eyga.
Noqo xanaaneeyaha xayawaanka adiga oo helaya aqoonta iyo tababarka lagama maarmaanka ah. Warshaduhu aad bay u tartamayaan oo dugsiyada xannaanada xayawaanka ee Florida waxay ku habboon yihiin sababo kala duwan.
Waa maxay Dugsiga Arooska eey?
Waa maxay Faa'iidooyinka Dugsiyada Qurxinta Eeyaha ee Florida
Immisa iskuul oo xanaanaynta eey ayaa ku yaal Florida?
Sidee loo noqdaa dhaqeeyaha eeyga Florida?
Dugsiyada ugu Wanaagsan Eyda ee Florida
1. Akadeemiyada Ey -jiilka
2. Kuliyada Dabeecadda Xoolaha (ABC)
3. Akademiyada Fanka & Sayniska Xoolaha
4. Dugsiga Merryfield of Pet Grooming
5. Dugsiga Qurxinta Eeyaha ee Paws Golden
6. Akaadamiyada Woof Gang of Grooming
7. Dugsiga Qurxinta Barxadda ee Xayawaanka
8. Wax walba oo ku saabsan u -qurxinta Eeyaha
9. Dugsiga Qurxinta Xayawaanka & Madadaalada
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Dugsiyada Qurxinta Eeyaha ee Florida
Dugsiga qurxinta eeyga waa iskuul aad ku qalabeysan tahay xirfado, aqoon, iyo farsamooyin si aad si sax ah u daryeesho eeyaha oo aad u noqoto xirfadle u qalma oo lacag ka sameeya.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo la yimaada ka -qaybgalka dugsiyada qurxinta eeyda ee Florida, waa:
Fursadaha Gargaarka Maaliyadeed: Qaar ka mid ah iskuulada qurxinta eeyga ee Florida waxay siiyaan fursado kaalmo maaliyadeed sida deeqaha waxbarasho, deeqaha waxbarasho, iyo amaahda muddada-dheer ee ardayda doonaya inay ku sii wataan xirfadda hagaajinta eyga.
Aqoonta Tayada: Imaanshaha iskuulada qurxinta eeyda ee Florida waxay kugu qalabeyn doontaa xirfadaha aad u baahan tahay si aad ugu hormariso mihnaddaada sidoo kale waxay ku siin doontaa aqoonsi la aqoonsan yahay oo kugu meelayn karta meel kasta ama bilaabi karta meheraddaada qurxinta eeyga.
Ikhtiyaarada Barashada Dabacsan: Dugsiyada qurxinta eeyga ee Florida waxay bixiyaan ikhtiyaarro waxbarasho oo dabacsan oo aad ka dooran karto, taasoo u oggolaanaysa ardayda inay wax ku bartaan xawligooda.
Waxaa sidoo kale loogu talagalay inay ka caawiso ardayda, gaar ahaan shaqsiyaadka durba shaqeynaya, inay weli diiradda saaraan shaqadooda ama mas'uuliyadaha kale inta ay qaadanayaan casharrada qurxinta eyga.
Florida waa gobol weyn oo leh xarumo waxbarasho oo badan iyo xarumo kale sida iskuulada qurxinta eeyga. Florida waxaa ku yaal 11 iskuul oo u diyaarsana eyga oo ay ku jiraan Dog Groomer Academy iyo Merryfield School of Pet Grooming.
Ma jiro iskuul caadi ah oo loo baahan yahay si aad u noqotid dhaqda eeyga Florida, waxaad u baahan tahay inaad danaynayso duurka oo isqorto. Waxaad ku noqon kartaa xanaaneeyaha eeyga Florida adiga oo maraya barnaamijka xanaanaynta eeyga rasmiga ah ama tababar u noqda xirfadle dhaqda eeyaha.
Midda hore waa ikhtiyaar ka fiican oo nabdoon. Barnaamijka rasmiga ahi wuxuu leeyahay manhaj dhammaystiran oo qalin -jabiyaha ayaa u badan inuu helo mushahar sare.
Akadeemiyada Eyga Groomer
Kuliyada Dabeecadaha Xayawaanka (ABC)
Akademiyada Fanka & Sayniska Xoolaha
Dugsiga Merryfield ee xannaanaynta xayawaanka
Dugsiga Qurxinta Eyda Dahabka ah
Akademiyada Woof Gang of Grooming
Dugsiga Qurxinta Barxadda Ciyaaraha
Wax walba oo ku saabsan Qurxinta Eeyga
Dugsiga Qurxinta Xayawaanka & Dalxiiska
Dog Groomer Academy waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta eeyaha ee Florida iyada oo ujeedadu tahay in ardayda la siiyo waxbarasho sare oo ku saabsan beerista xanaanada xayawaanka, iyo sidoo kale xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay si habboon u daryeelaan oo u maareeyaan eeyaha. Farsamooyinka ugu casrisan ee qurxinta eeyga waxaa lagu bari doonaa barnaamijka Tababbarka Uk.
Akadeemiyadu waxay bixisaa Dibloomada Dog Groomer Diploma ah oo ardayda wax ku barata xanaanaynta xayawaanka oo bara xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay u xannaaneeyaan xayawaankooda si xirfadaysan. Aqoonta ay u leeyihiin qurxinta eeydu waxay ka koobnaan doontaa mid aasaasi ah ilaa heer sare, sida sida loo maydho eyga qaabka Naadiga Kennel -ka Mareykanka iyo sida loo nadiifiyo eyga, iyo waxa loo baahan yahay si loo socodsiiyo ganacsiga qurxinta eeyga.
Kulliyadda Dabeecadda Xayawaanku waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta eeyga ee Florida, oo la aasaasay 1998, waxayna bixisaa barnaamijka shahaadaynta eeyaha eey u heli karaan ardayda labadaba qaababka barashada ee onlaynka ah iyo kan xerada. Barnaamijka waxaa lagu dhammeystiraa hal sano wuxuuna ku siinayaa fursad aad ku abuuri karto xiriir waara oo lala yeesho macaamiisha iyo xayawaanka eygooda.
Haddii aad iska diiwaangeliso barnaamijka onlaynka ah, waxaad la shaqayn doontaa xirfadleyaal u dhaqda eeyaha si aad u hesho xirfado gacmo-ku-qabsi ah oo waliba aad u dabaqdo dhammaan aragtiyihii aad ku baratay goob wax ku ool ah. Si guul leh u dhammaystirka barnaamijku wuxuu ku siin doonaa Kulliyadda Dabeecadda Xoolaha ee Shahaadada Pet Groomer (ABCPG). Lacagta wax lagu barto waxay u dhaxaysaa $ 3,799 ilaa $ 6,195.
Kani waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta eeyga ee Florida oo bixiya lix barnaamijyo qurxinta oo bixiya diblooma marka la dhammaystiro. Barnaamijyadu waa Junior Groomer, Farsamayaqaan Kennel, Groomer -ka aasaasiga ah, Xirfadlaha Pet Petroom, Horjooge Sare, iyo Master Groomer kuwaas oo dhammaantood loogu talagalay inay ardayda ku qalabeeyaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay ku guuleystaan ​​ganacsi guul ku leh warshadaha qurxinta xayawaanka.
Waxaad aadi kartaa mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada aad dooratay iyo khidmaddooda waxbaridda waxay u dhexaysaa $ 4,500 illaa $ 7,200 waxaana lagu dhammaystiraa 2 bilood gudahood. Ardaydu waa inay iibsadaan qalabkii ay u isticmaali lahaayeen tababbarka qurxinta eeyga gacmaha ku haya.
Dugsiga Merryfield waa mid ka mid ah dugsiyada sare ee qurxinta ee Florida oo bixiya barnaamijyo maalin iyo habeenba dabacsan oo loogu talagalay ardayda si ay u doortaan ikhtiyaarka barashada ugu fiican ee ku habboon jadwalkooda. Barnaamijka qurxinta halkan wuxuu u diyaariyaa ardayda xirfadda sida Sare Xirfadlaha Pet Pet. Waxaad baran doontaa sida si karti leh oo xirfad leh eeyaha loogu qurxiyo saloon, waddada, ama gurigaaga.
Xirfadaha qurxinta xayawaanka waxay ku lug leedahay barashada sida loogu shaqeeyo qalabka qurxinta, la macaamilka macaamiisha, nadiifinta kanaalka dhegaha, iyo shanlaynta iyo cadayashada dhogorta si looga saaro tangles. Barnaamijka waxaa kale oo ka mid ah tababarka gargaarka koowaad iyo qaabaynta iyo sidoo kale barashada cudurrada maqaarka iyo sida ugu fiican ee loo isticmaalo maqas.
10 bilood gudahood waxaad ku dhammayn doontaa barnaamijka oo aad noqon doontaa xirfadle ey ey dhaqda oo leh xirfad sumcad ku leh warshadaha.
Kani waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta eeyga ee Florida wuxuuna adeegsadaa qaab waxbarid oo gaar ah kaas oo ah talaabo talaabo talaabo ah oo uu naqshadeeyay oo nadiifiyay mid ka mid ah barayaasha ugu sareeya qaranka, Jacqueline Rauch. Qalabka waxbaridda waxaa loo habeeyay loona habeeyay si loo horumariyo qaabaynta tayada, xirfadaha, qaabaynta dulmarka, isku -darka, dheelitirka, iyo saamiga, iyo sida loo adeegsado xirfadahaas si loo abuuro naqshadeynta, hababka xakamaynta, maaraynta habboon, iyo farsamooyinka xawaaraha.
Ardayda waxaa la baraa inay bartaan dhammaan xirfadaha qurxinta aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan iyadoo xoogga la saarayo xirfadaha dhammaystirka wanaagsan. Waxaad sidoo kale baran doontaa sida loo bilaabo ganacsi guuleysta warshadaha qurxinta eeyga. Wadarta guud ee barnaamijka barnaamijka qaabaynta eeyaha xirfadda leh waa $ 6,780 iyo barnaamijka maydhashada eyga xirfadda leh waa $ 2,000.
Woof Gang waa hal iskuul qurxinta eeyga ee Florida iyada oo hadafkeedu yahay sare u qaadista xirfadda qurxinta iyo waxbaridda ardayda jawi dhiirrigeliya isku -xirnaanta waxbarashada, ganacsiga, iyo meheradda xirfadda leh.
Barnaamijka xannaaneeyaha pro wuxuu baraa ardayda dhammaan waxyaabaha daruuriga u ah inay noqdaan dhaqda eyga oo si dhakhso leh uga bilaabaan xirfad mushahar leh xarunta xannaanaynta. Fasallada waxaa lagu baraa afka iyada oo loo marayo muxaadarooyin, barashada buugga iyo muujinta fiidiyaha, iyo tababar gacmeed.
Dugsiga Grooming ee Xayawaanka Xayawaanka waa mid ka mid ah dugsiyada ugu wanaagsan ee qurxinta eyga ee Florida wuxuuna sidoo kale bixiyaa casharo ku saabsan sida bisadaha loo qurxiyo. Fasallada waxaa lagu bixiyaa Ingiriis, Isbaanish, iyo suugaan iyo kuwa shaqeeya waqti buuxa laakiin weli doonaya eey u qalanta u -qalmitaanka ama si fudud u doonaya inay helaan xirfadaha, waxay isku qori karaan fasallada dhammaadka Sabtida iyo Axadda.
Haa, kani waa magaca iskuulka qurxinta eeyga ee Florida, iyo sida magacu tilmaamayo, waxay ku saabsan tahay hagaajinta eeyga. Barnaamijka qurxinta eeyga waxaa lagu dhammayn karaa 90 maalmood ugu yaraan iyo ugu badnaan 365 maalmood ka dib taas oo aad ku hesho shahaadada abaalmarin ahaan tababarkaaga.
Markaad ku biirto dugsigan xirfadaha qurxinta eeyga waxaad ku qalabeysan doontaa xirfadaha aad si xirfad leh u qubaysato, goosato, iyo qaab maqas ama in ka badan 30 eey ee caadiga ah oo isku dhafan.
Liiskayagii ugu dambeeyay ee iskuulada qurxinta ugu wanaagsan ee Florida ayaa ah Dugsiga La -Qalanka ah ee Dab -damiska & Dalxiiska. Dugsigu wuxuu bixiyaa tababar gacmeed ardayduna waxay dooran karaan barnaamijyada ay rabaan inay iska diiwaangeliyaan. Waxaa jira saddex barnaamij oo ah Xirfadlaha Xirfadlaha, Kaaliyaha Xannaaneeyaha, ama Just for Fun-Groom Koorsooyinka Xayawaankaaga.
Barnaamijka waxaa lagu dhammeeyaa 12 saacadood illaa 200 saacadood wuxuuna la imanayaa tababar gacmeed iyo boorso.
Tani waxay soo afjari doontaa 9ka dugsi ee ugu sarreeya ee taranka ee Florida, dadka ku nool gobolka Florida waxay ka heli doonaan qoraalkan balooga mid waxtar leh.
Immisa ayuu ku kacayaa dugsiga qurxinta eey?
Qiimaha iskuulada qurxinta eeyda ee Florida iyo wadamada kale ayaa u dhexeeya $ 600 iyo $ 7,500.
Waa maxay dugsiga ugu wanaagsan ee eeyaha xanaanaynta?
Dugsiga qurxinta eeyga ugu fiican waa Penn Foster, waxaa lagu qiimeeyaa guud ahaan.
Intee in le'eg ayay tahay inaad tagto dugsiga si aad u noqotid dhaqda eyga?
Dhererka waqtiga aad ku qaadanayso dugsiga qurxinta eeyga waxay ku xiran tahay haddii aad u aaddo barnaamij tababar ama shahaado. In kasta oo barnaamijka tababarku soconayo inta u dhaxaysa 6-10 toddobaad halka barnaamijka shahaadadu qaadanayo 2 bilood illaa 1 sano si loo dhammaystiro
Shaqooyinka ugu sarreeya ee 20 Gaabis ah oo tartiib tartiib ah
Shaqooyinka ugu sarreeya ee 24-ka Sare ee loogu talagalay dadka soo galaya oo leh Mushahar Wanaagsan
13 Koorsooyinka Tooska ah ee Florida ee Ardayda
15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn
10 Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Maareynta Mashruuca Iyadoo Codsi Bilaash ah
6 Kulliyadaha ugufiican ee loogu talagalay Shahaadooyinka Ingiriisiga ee Hoose ee leh Kharashka Iskucelceliska Lacagta
Post blog Ganacsiga iyo Shaqooyinka koorsooyinka interneedka
iskuulada qurxinta eeyga ee Florida
Previous Post:30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican
Post Next:Turjun waraaqahan ka hor intaadan u dirin waxbarashada dibadda
Jaime wuu fuentes wuxuu leeyahay,
April 24, 2022 at 7: 46 pm
Buenas tardes me gustaría aprender peluquería canina y poder hacer una pyme